Visionspeng Somali - Orsa kommun
/ Vision 2050
/ Visionspeng Somali
Tani waa Lacagta Arragga (Visionspengen)
Waxaa jira 200,000 karoon sanadkiiba muddo saddex sano ah oo loo qoondeeyay in lagu horumariyo Orsa. Qof kasta oo soo jeedin leh wuu dalban karaa. Shuruudaha ayaa ah in soo jeedintu ay la jaanqaaddo Vision Orsa 2050 iyo in soo jeedintu ay raacdo shuruudaha kale ee Visionspengen (Lacagta Aragga). Lacagta waxaa loo qaybin doonaa soo jeedimaha codadka ugu badan ka hela dadka deegaanka iyada oo loo sii marinayo mareegaha degmada.
Lacagta aragga (Visionspeng)
MIYAAD LEEDAHAY FIKRAD aad rabto inaad ogaato si Orsa loo wanaajiyo? Markaas waxaad fursad u leedahay inaad dalbato lacag si aad adigu u fuliso. Qof kasta oo raba waa lagu soo dhaweynayaa inuu soo jeediyo, kolba inta badan ayaa ka sii fiican. Hal ama dhowr soo jeedin ayaa laga yaabaa inay wadaagaan 200,000 karoon. Lacagta aragtida (Visionspengen) waa mashruuc saddex sano ah oo 200,000 karoon loo qaybiyo sanad walba.
DHIB MALAHAN haddii aad tahay shan, konton ama boqol iyo shan sano. Bulsho wanaagsan ayaa si joogto ah u kobcaysa, waana hababkayaga kala duwan ee fekerka ee abuura xaaladaha helitaanka dariiqooyin lama filaan ah oo hore loogu socdo. Hadda waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysanno fikradahaaga iyo fikradahaaga xikmadda leh oo waxaanna leenahay waddo aan uga qaybgalno intii karaankeenna ah. Waxaan ugu yeernaa Lacagta Aragga (Visionspengen).
Tani waa sida ay u shaqeyso!
Tani waa sida ay u shaquyso!
Xeerarka iyo shuruudaha Lacagta Aragga (Visionspengen)
Xerarka iyo shuruudaha Lacagta Aragga
Verksamhetschef Service och utveckling
0250- 55 21 36
Senast uppdaterad: 3 juni 2022